Ixesha lokugweba: IWeb eTyebileyo, iiProtocol zeThebhulethi | Martech Zone
Iprototyper nje ikuvumela ukuba wakhe i-web esebenzisanayo etyebileyo, iselfowuni kunye neefowuni zecingo. I-Justintime Prototyper yenza ukuba kudalwe iiprototypes ezisebenzisanayo ngezimbo zomzimba kunye neziphumo ezimangalisayo. Unokwenza prototype idatha eqhutywa ziidatha kunye nefom yokuqinisekiswa ngaphandle komgca omnye wekhowudi. Jonga imizekelo yePrototyper kwindawo yabo.
Iimpawu ze-Justintime Prototyper:
Iiprotocol zesicelo seSelfowuni -Konwabele ukuprosesa iiapps zakho zeselfowuni ngesixhobo esinamandla kodwa kulula ukusisebenzisa ukuyila izijekulo, utshintsho, iimpembelelo kunye nokulinganisa uyilo oluphendulayo. Kwaye unokuvavanya iprototype yakho kwisixhobo esiphathwayo.
Ukusebenzisana kwenziwa lula -Shicilela, yabelana kwaye ufumane ingxelo exabisekileyo evela kubasebenzisi nakubathengi kwaye wenze lonke iqela lakho lisebenze kumzekelo ofanayo ngaxeshanye. Awudingi ukufaka naluphi na uhlobo lweseva.
Zonke-in-One App Prototyping Isixhobo -UJustinmind ubonelela ngokuseta okupheleleyo konxibelelwano kunye namawijethi kwezicelo zewebhu kodwa kunye nabadlali abaphambili kwindawo yesicelo esiphathwayo: i-iPhone, i-iPad, i-Android, kunye neFowuni yeWindows.
Ixesha lesithembiso libonelela ngelayisenisi yenyanga, yonyaka kunye neenguqu ezingapheliyo kunye nenguqulo yasimahla. Khuphela ingxelo yakho Ngoku.
tags: Umzekelo we-droidintambo yefowuniprototypengqo ngexeshauhlobo lweselfowunizokulimaprototyperprototype yeapp yewebhuwindows umfuziseloifayile